amabhokisi ahamba phambili | Rayson
Kuyo yonke le minyaka, iRayyson ibilokhu inikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezisebenzayo zokuthengisa ngenhloso yokuletha izinzuzo ezingenamkhawulo kubo. Amabhokisi ahamba phambili amabhokisi aseRaySpring aneqembu labasebenzi benkonzo ababhekele ukuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-Intanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo seLogistics, kanye nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa, kungani futhi senza khona, zama umkhiqizo wethu omusha - amabhokisi amahle kakhulu, noma ungathanda ukuba azwe kuwe. Ukwenza lo mkhiqizo uzokwenza ukuthi abantu bazizwe bekhululekile . Lo mphumela onethezekile uzoqhubeka ngisho nangemva kokugqoka okuningi nokuhlanza.